अयोग्यको बिल्ला भिराइएको माओवादी एक लडाकुको पीडै पीडाले भरिएको कहानी – YesKathmandu.com
बुधबार ०४, फागुन २०७३
रुपमा कम्युनिष्ट,सारमा यी सबै सामन्ती हुन । जीवनका उर्जाशील १५ वर्ष माओवादीमा बिताएर निकालेको निष्कर्ष हो यो मेरो ।जनयुद्ध दिवस मनाउने नाममा करोडौ खर्चने माओवादी नेतृत्वले हिजो लडाउँदा,भिडाउदा घाइते अङ्गभङ्ग भएका लडाकु र सिन्दुर पुछिएका चेलीहरु कहाँ छन के गर्दैछन भनेर बिर्सको देख्दा हामीलाई केवल सत्तामा पुग्नका लागि तीनका भ¥याङ मात्र बनाइएकोमा पीडा हुन्छ र नेतृत्व प्रति आक्रोश पोख्न मन लाग्छ । तर हामी जस्ता भुँइमान्छेको कुरा नेतृत्वले कहाँ सुन्छ र एक कानले सुन्छ अर्काे कानले उडाँउछ । नेतृत्वलाई हामीजस्ता पीडा सुन्ने फुर्सद नै कहाँ छ र ?
आज म जस्ता ४ हजार ८ माओवादी लडाकु अयोग्यको ट्याग भिरेर जीवन घिटिघिटि बाँचेर पलपल मरिरहेका छौं । अवस्था यस्तो थियो,पश्चिमको एक घरबाट एक जनमुक्तिसेनामा जानै पर्ने माओवादीको उर्दी थियो । हो,त्यही समय अर्थात ५८ सालबाट हो माओवादी आन्दोलनमा होमिएको । त्यससमय नेपाली सेनाले घरमा आगो लगाइदिए पछि ५८ वैशाख तीनबाट माओवादी आन्दोलनमा होमिए । सुरुमा जनसांष्कृतिक फाँटको कलाकार हुँदै जनमिलिसियामा पुगियो । ५९ सालमा खरा आक्रमण गरियो । सो समयमा टाउकोमा लागेको छर्रा बोकेर आज हिडिरहेको छु । त्यही छर्रा समेत निकाल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यही वर्ष चैत्र ७ गते म्याग्दी आक्रमण गरियो । पछाडि गण्डक अभियान सुरु भयो । गण्डकमै दुई वर्ष बिताए । त्यही बीचमा दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । ६३ सालमा माओवादी शान्ती प्रक्रियामा आएपछि लडाकु प्रमाणीकरणको विषय पनि जोडियो । हाम्रा डिभिजन कमाण्डर थिए शरद वूढामगर र अभिनाश वूढामगर । उनीहरुले प्रमाणीकरण गर्दा बास्तविक घाइते,अपांगलाई हेरेनन ।
डिभिजन कमाण्डरहरुले माओवादी आन्दोलनसँग केही साइनो नभएका आफ्ना श्रीमती,भान्जा,भान्जी,साला,साली सबै जसो आफन्तलाई माओवादी योग्य लडाकु बनाए । पाँच पाँच लाखको चेक थमाए । तर, माओवादी आन्दोलनमा दिलो ज्यान दिएर होमिएका हामीजस्तालाई भने अयोग्यको ट्गाय लगाइयो । आज कहाँ जानु जीवनका उर्जाशील समय माओवादी आन्दोलनमा होमिइयो । पढाइ,लेखाई छैन । गाँउमा गएर खेती किसानी गर्न सकिदैन । जागिर खोजौ योग्यता छैन । मर्नु र बाच्नुको दोसाँधमा जीवन घिसारिरहेका छौं ।
लडाकु प्रमाणीकरणको विषय हामीले पछाडि मात्र चाल पायौं । हामीलाई अयोग्यको बिल्ला पो लगाइएको रहेछ । सोही पछाडि घोराहीमा रहेको पार्टी कार्यलय कव्जा ग¥र्यौ । घोराीमा पार्टी कार्यलय कब्जा गरिए लगत्तै तत्कालीन शान्ती मन्त्री सत्या पहाडीसँग वार्ता पनि भयो । मुखले ‘तपाईहरुको माग सम्बोधन गर्छु’ भन्नुभयो । त्यही समयमा कागज पनि बन्यो । तर,कागजमै सिमित रह्यो ।कुन रद्धिको टोकरीमा फालियो सो कागज थाहा छैन । नेताहरुबाट केही पार नलागे पछाडि ६८ सालमा बहिगर्मित जनमुक्ति नेपालको नाममा संर्घष समिति बनायौं । जस्को संयोजक किरण दंगाल थिए । पाँच महिना पछाडि बुटवल राष्ट्रिय भेलाबाट सागर लिम्बुलाई अध्यक्षमा चुन्यौं । तर पार्टी टुक्रिएसँगै लिम्बु मोहन वैद्यको पछाडि लागे । यहीबीचमा ६९ सालमा पेरिसडाँडा आन्दोलन भयो । ४ महिना पछाडि आन्दोलनको नेतृत्व गर्न लेनिन विष्ट आइपुगे । यिनी आएसँगै लडाकु आन्दोलन झनै भाँडियो । हामी सबै सोझा सिधा थियौं । तर उनी रहेछन चण्डाल ।
४ हजार ८ अयोग्य लडाकुको टाउको देखाएर भरण पोषण गर्ने नाममा कहिले शिवसेना ,कहिले जर्मन, अमेरिकन,स्वीजल्याण्ड एम्बेसी चहारेर पैसा बटुल्दा रहेछन । पछाडि मात्र चाल पायौं । एकातिर पेरिसडाँडा घेर्न आएका साथीहरु भोकभोकै मर्ने,अर्काेतिर विभिन्न दुतावास चाहर्दै लेनिनले पैसा बटुल्ने तर फुट्या कौडी नदेखाउने गर्न थाले । अयोग्य लडाकुको नाममा पार्टी नेतृत्वले त सौतेनी व्यवहार गरेकै थियो पछाडि लेनीन विष्ट थपिए । अयोग्य लडाकुको नाममा उनी कमाउधन्दा चलाउन थालेछन । पछाडि शान्तीमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी हुँदा अयोग्य लडाकुको नाममा १५ लाख छुट्याइयो । तर,अयोग्य लडाकुलाई परिचयपत्र दिने नाममा भित्रभित्रै लेनिन विष्ट र टोपबहादुर रायमाझी मिलेमतोमा यही पन्ध्र लाख रुपैंया पनि गायब बनाइयो । बरु प्रत्येक अयोग्य लडाकुको हातमा एउटा एउटा कार्ड थमाइयो । त्यो कार्डले न खान दिन्छ न लाउन दिन्छ । भोक लाग्दा त्यही कार्ड चपाएर भोक मर्दैन । पछाडि वावुराम भट्टराइले प्रत्येक अयोग्य लडाकुको नाममा २ लाख छुट्टाएका थिए । सो पनि पाइएन । यसमा पनि उनै लेनिनहरुको सक्रियता रह्यो । टुप्पाबाट पलाएका लेनिनको उल्टो यात्रा कति दिन नै टिक्थ्यो र ? पछाडि उनी कल वाइपासको आरोपमा जेल परेपछाडि ६१ सदस्यीय अर्काे संर्घष समिति बन्यो मेरै नेतृत्वमा । डेढ वर्ष पछाडि विष्ट जेलबाट छुटे ।
र, अयोग्य लडाकुको अध्यक्ष मै हुँ भन्दै हिड्न थाले । यीनि माओवादी सिद्धाउछु मलाई सहयोग गर्नुप¥र्यो भन्दै कहिले कनकमणी,खुमबहादुर खड्का,सुवोध प्याकुरेल,सोनी साहहरु कहाँ पुगेर रकम बटुल्थे र माओवादी आन्दोलन भाड्न सक्रिय रहन्थे । माओवादीले हामी जस्ता सच्चा माओवादीलाई होइन माओवादी शान्ती प्रक्रियामा आएपछि माओवादी बनेका विष्टहरुलाई च्याप्दै हिड्यो । यस्तै चैतेले पार्टीमा अवसर पाँउदै आएका छन र त पार्टी आज सिद्धिदै,खिइदै गएको छ । पार्टीले गोबर र गु चिनेन । हिजो चप्पल लगाएर राजधानी छिरेको र सिटिइभिटिइको एउटा साधरण जागिरे विष्ट आज आफ्नो विवाहमा २० लाख खर्च गर्नसक्ने औकात र हैसियत बनाएका छन । यीनको आम्दानीको स्रोत के हो ? अस्ति भर्खर मात्र यीनले १९ लाख खर्च गरेर आफ्नो विवाह गरेका छन । एकातिर माओवादी लडाकुहरु भोकभोकै मर्न अर्काेतिर लडाकुको नाममा यी र यस्तै चैतेहरुले आफ्नो पुस्तालाई पुग्नेगरी भुँडी भरेको विकृतीबारे कस्ले मुख खोल्ने ?कस्ले बोल्ने ? आज पनि अयोग्य लडाकुको अध्यक्ष मै हुँ भन्दै हिड्छन जबकी यीनको पक्षमा सुवास थापा,दीलबहादुर रम्तेल बाहेक अरु कोही छैन । वास्तविक लडाकुको अवस्था आज पनि जिविकोपार्जन गर्न गाह्रो छ ,कोही खाँडी मुलुकमा पुगेर घोडाको लित्ति सोर्दै छन । कोही जीवन गुर्जान ज्यामी मजदुरी गर्दैछन ।
यो बीचमा अयोग्यको ट्याग लागेकै कारण पाँच जना साथीले आत्महत्या गरिसकेका छन । यो विषयलाई लिएर पार्टी अध्यक्षलाई सयौं पटक भेटियो । तर, सधैं उही दहिच्यूरे कुरा गर्नुहुन्छ । वावुराम भट्टराईको के कुरा गर्नु ? अयोग्य लडाकुले पाउनुपर्ने दुई लाख नपाए ती मेरै पार्टीमा आउथे त्यही कारण कुनै हालतमा त्यो रकम नपाउनु भन्ने ठान्नुहुन्छ । ती सधैं कुरा खोक्रो कुरा गर्ने हुन । यी अयोग्य मेरै पार्टीमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको सोच छ ।तर,हामी उनको पार्टीमा किन लाग्नु ? पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै समयमा अयोग्य लडाकुको नाममा ८४ करोड छुट्याइएको हो । त्यही रकम समेत माओवादीले वितवरण गर्न सकेन ।
माओवादी आन्दोलनमै होमिदा २० लाख रुपैंया ऋण लागेको छ । यो ऋण कहाँबाट कसरी तिर्ने ? गाँउमा भएको आफ्नो जग्गा जमिन सारा बेच्दा २ लाख पनि हात पर्दैन । यो बीचमा मणी थापा,प्रकाश रोकाय,बादल,चन्द्र प्रकाश खनाल‘बलदेव’हरुलाई भेट्दा पार्टी आन्दोलनका लागि भएको खर्च पार्टीले बेर्होछ भन्थे । अहिले भेट्न खोज्दा यी सबै तर्कन्छन । माओवादीले कार्यकर्ता यूज एण्ड थ्रो मात्रै गर्न भाँडो बनायो । अब स्थानीय निकायको चुनाब आँउदै छ । यो समयमा माओवादी नेतृत्वलाई हामी जस्ता लडाकुहरुको खाँचो पर्ला अनि हामीलाई सम्झेला । त्यो समय हामी पनि देखाइदिने छौं । घरमा वूढा भएका बुवा,आमा हुनुहुन्छ । माओवादीकै कारण मैले आफ्नै बुवा आमालाई हेर्न सकिन । आज पनि मलाई घर परिवारभन्दा संगठनको चिन्ता छ । जागिर खाँउ पढाई छैन,गाँउमा जाँउ फर्कन मन छैन । मर्नु र बाच्नुको अवस्थामा आफ्ना कार्यकर्तालाई छाडेर माओवादी नेतृत्व आज पनि धनयुद्धको पछाडि लागेको छ । यस्तै पाराले माओवादी पत्तासाप होला कि भन्ने चिन्ताले पिरोल्छ ।
अर्जुन वूढाथोकी,संयोजक बर्हिगर्मित जनमुक्ति सेना नेपाल -जनआस्था साप्ताहिकबाट
स्ववियु चुनाव रारा क्याम्पसमा स्थगित
One thought on “अयोग्यको बिल्ला भिराइएको माओवादी एक लडाकुको पीडै पीडाले भरिएको कहानी”
sade yo kura mero pani chita bujhen yesto ghat gardai xa माओबादि
लिपुलेक सम्झौताबारे सरकारको आलटाले जवाफ